Esi maya22 usb драйверы
MAYA22 USB is not simply another USB audio interface — it’savery stylish portable device that can go with you anywhere. It offers total flexibility as an external and fully bus-powered USB device with excellent professional 24-bit audio quality.
If you’re looking forareally powerful USB audio device that is small and that gives you maximum performance under any current Windows system as well as under Mac OS X, then MAYA22 USB is for you. It’s incredible how many functions are provided by this small device!
Cubasis LE is the compact version of Steinberg‘s mobile multitouch sequencer, providing the same look and feel of its bigger brother Cubasis. Specially designed for quick and easy operation, Cubasis LE makes recording, editing and mixingabreeze, no matter where you are, right there on an iPhone or iPad when connecting MAYA22 USB.
Читайте также: Что делать если нет драйвера wifi
Our website always shows the latest information on what we currently ship with our products. Depending on the production date, it can sometimes be possible thatadifferent software package is included with the MAYA22 USB atalocal reseller. The actual content is mentioned on the retail box of the product itself. If you are unsure, please contact us.
Here are selected reviews of MAYA22 USB:
Axel Ritt from Amazona.de checked out our MAYA22 USB and mentioned: «The ESI MAYA22 USB is an interface on the market that excels with good features andalow price.» Read the fiull german language text here!
Felix Klostermann from online magazine Bonedo (Germany) checked our MAYA22 USB in detail and mentioned:«good audio quality» / «compact, sturdy design« / «very good price/value« — read the full german review here!
Marco Sulek of German online magazine Music & Stuff hadaclose look on our MAYA22 USB and liked it especially for mobile recording: «compact stable case» / «high compatibility» / «interesting concept» — check the full text here.
MAYA22USB Installation Disk
MAYA22USB Controller driver Rev A
MAYA22USB Controller driver Rev B
Service for ESI MAYA22USB Controller driver
ASIO 2.0 — ESI MAYA22USB
MAYA22USB Audio Installation Disk
MAYA22USB Audio driver
Service for ESI MAYA22USB Audio driver
window.__CONFIG__ = <"statistics":<"enabled":true,"google":<"enabled":true,"trackingIDcatalog":"UA-16117929-1","trackingIDcommon":"UA-58593486-1","experimentScript":null,"cxApiDomain":null>,»yandex»:<"enabled":true,"counterId":"1347623","url":"https://drp.su">,»defaults»:<"category":"website","label":"">>,»sentry»:»https://4f16d0cf7913419e81585433230a3e88@sentry2.drp.su/9″>; window.__INITIAL_STATE__ = <"app":<"host":"driverpack.io","protocol":"https","locale":"my","language":<"plural":"return Number(0)","search_noresult":"DriverPack Online ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူမည်","deviceclasses_bluetooth-single-main":"Bluetooth စက်ကိရိယာ","deviceclasses_bluetooth-single-for":"Bluetooth စက်ကိရိယာ","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-bluetooth":"Bluetooth-adapters, Bluetooth-headsets, wireless earphones, wireless speakers/ selfie sticks, styluses, remote controls, portable acoustic gadgets, household devices, guard systems, smart house devices, and others","deviceclasses_bluetooth-plural-main":"Bluetooth စက်ကိရိယာများ","deviceclasses_bluetooth-plural-for":"Bluetooth စက်ကိရိယာများ","deviceclasses_cardreader-single-main":"ကဒ်ဖတ်စက်","deviceclasses_cardreader-single-for":"ကဒ်ဖတ်စက်","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-cardreader":"Card readers, memory card adaptors, socket adapters, PCIe-controllers, xD-SD-MS-MMC cards, and others","deviceclasses_cardreader-plural-main":"ကဒ်ဖတ်စက်များ","deviceclasses_cardreader-plural-for":"ကဒ်ဖတ်စက်များ","deviceclasses_chipset-single-main":"chipset","deviceclasses_chipset-single-for":"chipset","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-chipset":"Chipsets, system boards, BIOS, processors, servers, microcontrollers, power saving devices, sensors, host controllers, TPM crypt processors, system controllers, and others","deviceclasses_chipset-plural-main":"chipsets များ","deviceclasses_chipset-plural-for":"chipsets များ","deviceclasses_inputdev-single-main":"အသွင်းကိရိယာ","deviceclasses_inputdev-single-for":"အသွင်းကိရိယာ","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-inputdev":"Keyboards, mice, touchpads, trackballs, presenters, joysticks, gamepads, steering wheels and pedals, other game manipulators, and others","deviceclasses_inputdev-plural-main":"အသွင်းကိရိယာများ","deviceclasses_inputdev-plural-for":"အသွင်းကိရိယာများ","deviceclasses_lan-single-main":"ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သည့်ကဒ်","deviceclasses_lan-single-for":"ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သည့်ကဒ်","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-lan":"Network LAN cards, routers, communicators, splitters, port-replicators, print-servers, KVM-devices, PoE-injectors, network screens and gateways, and others","deviceclasses_lan-plural-main":"ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သည့်များ","deviceclasses_lan-plural-for":"ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သည့်များ","deviceclasses_massstorage-single-main":"controller","deviceclasses_massstorage-single-for":"controller","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-massstorage":"Hard disks controllers, data transmitters, IDE and SATA controllers, SCSI and RAID systems, USB-sticks, external hard disks, floppy disk drives, and CD/DVD/Blue Rays, and others","deviceclasses_massstorage-plural-main":"controllers များ","deviceclasses_massstorage-plural-for":"controllers များ","deviceclasses_modem-single-main":"modem","deviceclasses_modem-single-for":"modem","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-modem":"Modems, routers, communicators, DSL-modems, transceivers, xDSL, and ATC devices, and others","deviceclasses_modem-plural-main":"modems များ","deviceclasses_modem-plural-for":"modems များ","deviceclasses_monitor-single-main":"မော်နီတာ","deviceclasses_monitor-single-for":"မော်နီတာ","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-monitor":"Monitors, digital TV sets, usb-monitors, screens, and others","deviceclasses_monitor-plural-main":"မော်နီတာများ","deviceclasses_monitor-plural-for":"မော်နီတာများ","deviceclasses_phone-single-main":"စမတ်ဖုန်း","deviceclasses_phone-single-for":"စမတ်ဖုန်း","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-phone":"Smartphones, mobile phones, smart watches, fitness bangles, chargers, data transfer interfaces (SSI), docking stations, flash-lights for selphie, ports and slots, and others","deviceclasses_phone-plural-main":"စမတ်ဖုန်းများ","deviceclasses_phone-plural-for":"စမတ်ဖုန်းများ","deviceclasses_printer-single-main":"ပရင်တာ","deviceclasses_printer-single-for":"ပရင်တာ","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-printer":"Printers, scanners, multifunctional devices, plotters, copy machines, laminators, binding machines, trade equipment, paper shredders, cutters, 3D printers, and others","deviceclasses_printer-plural-main":"ပရင်တာများ","deviceclasses_printer-plural-for":"ပရင်တာများ","deviceclasses_sound-single-main":"အသံကဒ်","deviceclasses_sound-single-for":"အသံကဒ်","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-sound":"Sound cards, external audio cards, amplifiers, microphones, speakers, headphones, audio outlets, audio adapters, audio, and ASIO interfaces, and others","deviceclasses_sound-plural-main":"အသံကဒ်များ","deviceclasses_sound-plural-for":"အသံကဒ်များ","deviceclasses_tvtuner-single-main":"တီဗီလိုင်းဖမ်းစက်","deviceclasses_tvtuner-single-for":"တီဗီလိုင်းဖမ်းစက်","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-tvtuner":"TV tuners, video capture devices, projectors, receivers, digital consoles, and others","deviceclasses_tvtuner-plural-main":"တီဗီလိုင်းဖမ်းစက်များ","deviceclasses_tvtuner-plural-for":"တီဗီလိုင်းဖမ်းစက်များ","deviceclasses_video-single-main":"ဗီဒီယိုကဒ်","deviceclasses_video-single-for":"ဗီဒီယိုကဒ်","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-video":"Video cards, cooling systems, video outs, video interfaces, DVI video connectors and Display Ports HDMI ports, and others","deviceclasses_video-plural-main":"ဗီဒီယိုကဒ်များ","deviceclasses_video-plural-for":"ဗီဒီယိုကဒ်များ","deviceclasses_webcamera-single-main":"ဝက်ဘ်ကမ်","deviceclasses_webcamera-single-for":"ဝက်ဘ်ကမ်","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-webcamera":"Webcams, IP-cams, action cams, video surveillance cams, video baby monitors, rear-view cameras, cameras for quadcopters, smart house, and others","deviceclasses_webcamera-plural-main":"ဝက်ဘ်ကမ်များ","deviceclasses_webcamera-plural-for":"ဝက်ဘ်ကမ်များ","deviceclasses_wifi-single-main":"ဝိုင်ဖိုင် စက်ကိရိယာ","deviceclasses_wifi-single-for":"ဝိုင်ဖိုင် စက်ကိရိယာ","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-wifi":"Wi-Fi, and WLAN devices, wireless adapters, routers, signal amplifiers, repeaters, access points, 3G and 4G devices, and others","deviceclasses_wifi-plural-main":"ဝိုင်ဖိုင် စက်ကိရိယာများ","deviceclasses_wifi-plural-for":"ဝိုင်ဖိုင် စက်ကိရိယာများ","deviceclasses_other-single-main":"အခြား စက်ကိရိယာ","deviceclasses_other-single-for":"အခြား စက်ကိရိယာ","landingtopvendorslist_h2-drivers-for-other":"Biometrics devices, graphic tablets, e-books, geo-location devices, programmers, ports, VR&AR devices, USB gadgets, DisplayLink devices, automotive electronics, cash registers, POS terminals, and others","deviceclasses_other-plural-main":"အခြား စက်ကိရိယာများ","deviceclasses_other-plural-for":"အခြား စက်ကိရိယာများ","softcategories_antivirus-single-main":"ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး","softcategories_antivirus-plural-main":"ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_audio-video-converter-single-main":"အသံ/ဗီဒီယို ပြောင်းစက်","softcategories_audio-video-converter-plural-main":"အသံ/ဗီဒီယို ပြောင်းစက်များ","softcategories_audio-video-editor-single-main":"အသံ/ဗီဒီယို တည်းဖြတ်စက်","softcategories_audio-video-editor-plural-main":"အသံ/ဗီဒီယို တည်းဖြတ်စက်များ","softcategories_book-reader-single-main":"အီး-စာအုပ်ဖတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_book-reader-plural-main":"အီး-စာအုပ်ဖတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_browser-single-main":"ဝက်ဘ်ဘရောက်ဆာ","softcategories_browser-plural-main":"ဝက်ဘ်ဘရောက်ဆာများ","softcategories_cd-dvd-single-main":"စီဒီ/ဒီဗွီဒီ","softcategories_cd-dvd-plural-main":"စီဒီများ/ဒီဗွီဒီများ","softcategories_data-recovery-single-main":"ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_data-recovery-plural-main":"ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_data-storage-single-main":"ဒေတာသိမ်းဆည်းမှု ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_data-storage-plural-main":"ဒေတာသိမ်းဆည်းမှု ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_developer-tools-single-main":"ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရေးသူသုံး ကိရိယာ","softcategories_developer-tools-plural-main":"ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရေးသူသုံး ကိရိယာများ","softcategories_file-manager-single-main":"ဖိုင်မန်နေဂျာ","softcategories_file-manager-plural-main":"ဖိုင်မန်နေဂျာများ","softcategories_image-editor-single-main":"ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းတည်းဖြတ်စက်","softcategories_image-editor-plural-main":"ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းတည်းဖြတ်စက်များ","softcategories_image-viewer-single-main":"ရုပ်ပုံကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_image-viewer-plural-main":"ရုပ်ပုံကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_mail-client-single-main":"အီးမေးလ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_mail-client-plural-main":"အီးမေးလ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_messenger-single-main":"စကားဝိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_messenger-plural-main":"စကားဝိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_mp3-audio-player-single-main":"MP3 နှင့် အသံဖွင့်စက်","softcategories_mp3-audio-player-plural-main":"MP3 နှင့် အသံဖွင့်စက်များ","softcategories_other-single-main":"အခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_other-plural-main":"အခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_pdf-reader-single-main":"PDF ဖတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_pdf-reader-plural-main":"PDF ဖတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_text-editor-single-main":"စာသားတည်းဖြတ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_text-editor-plural-main":"စာသားတည်းဖြတ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_torrent-client-single-main":"Torrent ဆော့ဖ်ဝဲလ်","softcategories_torrent-client-plural-main":"Torrent ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ","softcategories_video-player-single-main":"ဗီဒီယိုဖွင့်စက်","softcategories_video-player-plural-main":"ဗီဒီယိုဖွင့်စက်များ","adminlandingpage_title":"ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားများ အတွက် DriverPack - မည်သည့်ကွန်ပျူတာတွင်မဆို အလိုအလျောက် driver တင်ပေးခြင်း","admincackle_dialog-star":"ကျေးဇူးပြု၍ DriverPack ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါ","admindriverpacks_landing-title":"Driverpacks (drivers များစုစည်းမှု)","admindriverpacks_landing-subtitle":"ကျွန်ုပ်တို့ driverpacks တွင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် <> drivers များပါဝင်ပါသည်»,»admindriverpacks_download»:»ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»adminfaq_landing-title»:»သင်၏မေးခွန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေကြားပေးပါသည်»,»adminfaq_landing-subtitle»:»DriverPack ပတ်သက်၍ သင်မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသည် — ထိုမေးခွန်းများထဲမှ အမေးများဆုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ဖြေကြားပေးပါသည်»,»adminheader_cta-text»:»DriverPack မှာ ဝါရင့်သမားများအတွက် ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း ဝါနုသမားများအတွက်တောင် အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပါသည်»,»adminheader_cta-btn»:»DriverPack Online ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူမည်»,»experiment-donate-popup-btn-buy»:»Buy DriverPack»,»buttonsplitdropdown_main-button»:»ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»cloudfaq_landing-title»:»သင်၏မေးခွန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေကြားပေးပါသည်»,»cloudpagefooter_license-link»:»လိုင်စင်သဘောတူညီချက်»,»breadcrumbs_main-text»:»ပင်မစာမျက်နှာ»,»breadcrumbs_catalog-main-text»:»<> အတွက် drivers များ»,»breadcrumbs_softcategory-text»:»<>»,»breadcrumbs_soft-text»:»<> <>»,»breadcrumbs_uninstall-text»:»ဖယ်ရှား»,»breadcrumbs_vendors-text»:»ထုတ်လုပ်သူများ»,»breadcrumbs_vendor-text»:»<>»,»breadcrumbs_vendorlanding-text»:»<> အတွက် drivers များ»,»breadcrumbs_deviceclass-text»:»<>»,»breadcrumbs_devicegroups-text»:»<> <>»,»breadcrumbs_devicegroup-text»:»<> <>»,»breadcrumbs_notebooks-text»:»လက်ပ်တော့ပ်များ»,»breadcrumbs_notebookvendor-text»:»<> လက်ပ်တော့ပ်များ»,»breadcrumbs_notebook-text»:»<> <>»,»breadcrumbs_notebookdevices-text»:»<> <> လက်ပ်တော့ပ်၏ <>»,»devicecard_download-btn»:»Driver ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»devicecard_download-repack-btn»:»ZIP ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»devicecard_details_no-results-text»:»Windows <> အတွက် အဆိုပါ <> drivers များကို ကက်တလောက်ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ အထက်ပါ driver ကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် <>။»,»devicecard_details_no-results_download-link»:»DriverPack ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ»,»devicecard_details-content-text»:»ဒေတာ ရယူနေသည်…»,»devicecard_details_all-systems»:»စနစ်များအားလုံး»,»devicecard_details-content-label-version»:»ဗားရှင်း:»,»devicecard_details-content-label-version-recommended»:»အကြံပြုထားသည်»,»devicecard_details-content-label-date»:»ရက်စွဲ:»,»devicecard_details-content-label-type»:»Driver အမျိုးအစား:»,»devicecard_details-content-label-manufacturer»:»ထုတ်လုပ်သူ:»,»devicecard_details-content-label-systems»:»လည်ပတ်မှု စနစ်များ:»,»devicecard_details-content-label-deviceid»:»Device ID:»,»devicecard_details-content-label-inf»:»ဖိုင် *.inf:»,»devicecard_details-content-label-section»:»အမျိုးအစား:»,»devicecard_details-download-links-repack»:»အဆိုပါ driver ပါဝင်သော ZIP ကို တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»devicecard_details-links-merged_label»:»အဆိုပါစာရင်းထဲတွင် သင်လိုအပ်သော Device ID ကိုရှာမတွေ့ပါက၊ ရှာဖွေရန်တွင် ထည့်သွင်းရှာဖွေနိုင်ပါသည်»,»devicecard_details-links-notebook_device»:»Drivers အားလုံးကို ကြည့်ရှုမည်»,»devicecard_details-links»:»အတွက် Drivers အားလုံးကို ကြည့်ရှုမည်»,»devicecardlist_no-result_download-link»:»DriverPack ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ»,»devicecardlist_no-results-device-text»:»Windows <> အတွက် အဆိုပါ <> drivers များကို ကက်တလောက်ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ အထက်ပါ driver ကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် <>။»,»devicecardlist_no-results-notebook-text»:»Windows <> အသုံးပြုသည့် <> လက်ပ်တော့ပ်အတွက် drivers များကို ကက်တလောက်ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ အထက်ပါ driver ကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် <>။»,»devicecardlist_no-results-notebook-device-class-text»:»Windows <> အသုံးပြုသည့် <> လက်ပ်တော့ပ်အတွက် အဆိုပါ <> drivers များကို ကက်တလောက်ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ အထက်ပါ driver ကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် <>။»,»devicegrouppage_all-systems»:»စနစ်များအားလုံး»,»notebookpage_all-systems»:»စနစ်များအားလုံး»,»devicegroupfilters_filter-title»:»ရရှိနိုင်သော drivers များ»,»deviceidfilters-filter-label-version»:»Driver ဗားရှင်း:»,»deviceidheader_caption-single»:»စက်ပစ္စည်း အမည်:»,»deviceidheader_caption-many»:»ဤ စက်ပစ္စည်းကို အောက်ပါအတိုင်းလည်း ခေါ်ဆိုကြပါသည်:»,»devicetypecommentlist_bluetooth»:»Bluetooth-adapters / Bluetooth-headsets / wireless speakers / wireless earphones / smart house devices / others»,»devicetypecommentlist_video»:»Video cards / video interfaces / DVI video connectors and Display Ports / HDMI / others»,»devicetypecommentlist_cardreader»:»Card readers / memory card adaptors / PCIe-controllers xD-SD-MS-MMC / others»,»devicetypecommentlist_lan»:»Network LAN cards / routers / communicators / splitters / port-replicators / others»,»devicetypecommentlist_phone»:»Smartphones / mobile phones / smart watches / fitness bangles / docking stations / others»,»devicetypecommentlist_massstorage»:»Hard disks controllers / IDE and SATA / SCSI and RAID / floppy CD/DVD / others»,»devicetypecommentlist_printer»:»Printers / plotters / scanners / copy machines / laminators / 3D printers / others»,»devicetypecommentlist_webcamera»:»Webcam / IP / action cams / surveillance / baby monitor / others»,»devicetypecommentlist_chipset»:»Chipset / system boards / BIOS / processors / servers / microcontrollers / others»,»devicetypecommentlist_modem»:»Modems / routers / communicators / xDSL / ATC / others»,»devicetypecommentlist_sound»:»Sound cards / external audio cards / amplifiers / microphones / speakers / headphones / others»,»devicetypecommentlist_wifi»:»Wi-Fi / WLAN / wireless adapters / signal amplifiers / 3G and 4G / others»,»devicetypecommentlist_inputdev»:»Keyboards / mice / joysticks / touchpads / presenters / trackballs / gamepads / other»,»devicetypecommentlist_monitor»:»Monitors / digital TV sets / usb-monitors / screens / others»,»devicetypecommentlist_tvtuner»:»TV tuners / video capture devices / projectors / receivers / digital consoles / others»,»devicetypecommentlist_other»:»Biometrics devices / graphic tablets / e-books, / geo-location devices / programmers / ports / VR&AR devices / USB gadgets / DisplayLink devices / automotive electronics / cash registers / POS terminals / others»,»devicetypelist_title_os»:»<> အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် driver»,»devicetypelist_title»:»စက်ပစ္စည်းများအတွက် Driver ရှာဖွေမှု»,»dll-landing-title»:»Use the Alphabetical Index to find the required dll-file»,»exp-2-donate-adv-i-driver-start»:»Install»,»exp-2-donate-adv-i-driver-3-mid»:»3″,»exp-2-donate-adv-i-driver-end»:»drivers»,»exp-2-donate-adv-i-driver-1-mid»:»1″,»exp-2-donate-adv-i-driver-all»:»Install All Drivers»,»exp-2-donate-adv-voice-assistant»:»Voice Assistant»,»exp-2-donate-adv-all-prev»:»All previous»,»exp-2-donate-adv-support»:»Chat with human support»,»exp-2-donate-adv-expert-mode»:»Expert mode»,»exp-2-donate-per-month»:»/ mounth»,»experiment-donate-head-start»:»Meet —»,»experiment-donate-head-end»:»the new DriverPack!»,»experiment-donate-body-start»:»DriverPack now installs»,»experiment-donate-body-strong»:»only drivers»,»experiment-donate-body-end»:»— no more unwanted software.»,»experiment-donate-footer-start»:»The new DriverPack exists because of your support.»,»experiment-donate-footer-strong-first»:»Get the best»,»experiment-donate-footer-middle»:»driver installation tool»,»experiment-donate-footer-strong-last»:»for the price ofacup of coffee»,»experiment-donate-footer-end»:»— Every donation counts»,»landingheader_cta-btn»:»လိုအပ်သော drivers အားလုံးကို ထည့်သွင်းမည်»,»experiment-donate-not-payed»:»Choose an amount:»,»experiment-donate-payed»:»Thank you for your purchase!»,»experiment-donate-btn-text»:»You will be taken to the payment site»,»experiment-donate-free-start»:»You still have the option»,»experiment-donate-free-end»:»to Download DriverPack for free»,»experiment-donate-popup-btn-download»:»Download DriverPack»,»landingfeatures_item-title-free»:»အခမဲ့»,»exp-2-popup-title-sub»:»Choose your DriverPack subscription plan»,»exp-2-popup-title-donate»:»Select which DriverPack plan you’d like to buy»,»exp-2-donate-adv-autofit»:»Driver autopick»,»exp-2-donate-subscribe»:»Subscribe»,»exp-2-donate-buy»:»Buy»,»exp-2-download-free-start»:»Only need»,»exp-2-download-free-middle»:»one»,»exp-2-download-for-free»:»Download for free»,»exp-2-donate-val-per-month»:»/ month»,»exp-2-download-free-end»:»driver installed? Then you can»,»exp-2-thank-you-popup-title-1″:»Thank you for supporting DriverPack!»,»exp-2-thank-you-popup-title-2″:»Run the downloaded file.»,»exp-2-thank-you-popup-footer-start»:»If the file does not download click here —»,»exp-2-thank-you-popup-footer-end»:»download DriverPack»,»drivercard_no-results-text»:»Windows <> အတွက် အဆိုပါ <> drivers များကို ကက်တလောက်ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ အထက်ပါ driver ကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် <>။»,»drivercard_no-results_download-link»:»DriverPack ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ»,»drivercard_caption-version»:»ဗားရှင်း:»,»drivercard_caption-version-recommended»:»အကြံပြုထားသည်»,»drivercard_caption-date»:»ရက်စွဲ:»,»drivercard_caption-class»:»စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား:»,»drivercard_caption-manufacturer»:»ထုတ်လုပ်သူ:»,»drivercard_caption-os»:»လည်ပတ်မှု စနစ်များ:»,»drivercard_caption-deviceid»:»Device ID:»,»drivercard_caption-inf»:»ဖိုင် *.inf:»,»drivercard_caption-section»:»အမျိုးအစား:»,»drivercard_caption-btn»:»Driver ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»drivercard_caption-repack-btn»:»ZIP ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»deviceidpage_all-systems»:»စနစ်များအားလုံး»,»dropdowndriverversion_no-results»:»ရွေးချယ်ထားသော OS အတွက် အဆိုပါ drivers များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ»,»dropdownos_current»:»လက်ရှိ»,»faq_sections-main-all»:»Frequently asked questions (FAQ), and answers to them»,»faq_questions_what-is-driver»:»What isadriver?»,»faq_questions_what-is-drp»:»What is DriverPack?»,»faq_questions_is-drp-free»:»Is DriverPack free of charge?»,»faq_questions_what-are-system-requirements»:»What are system requirements for DriverPack?»,»faq_questions_drp-fit-to-just-installed-windows»:»Does DriverPack fit to just installed Windows?»,»faq_questions_drp-fit-for-driver-update-on-laptop»:»Does DriverPack fit for driver update onalaptop?»,»faq_questions_drp-versions»:»What DriverPack versions are there?»,»faq_questions_update-drivers-without-internet»:»Is it possible to update drivers without Internet connection?»,»faq_questions_how-to-install»:»How to install DriverPack?»,»faq_questions_drp-offer-support»:»Does DriverPack offer any help or support?»,»faq_questions_how-to-update-bios-by-using-drp»:»How to update BIOS by using DriverPack?»,»faq_questions_how-often-is-driver-database-updated»:»How often is driver database updated in DriverPack?»,»faq_questions_why-should-update-drivers»:»Why should I update drivers versions?»,»faq_questions_how-to-update-drivers-by-using-drp»:»How to update drivers by using DriverPack?»,»faq_questions_drivers-for-old-devices-in-drp»:»Are there drivers for old devices in DriverPack?»,»faq_questions_where-drivers-in-drp-come-from»:»Where do the drivers in DriverPack come from?»,»faq_questions_wh-device-drivers-on-many-websites-get-updated-less-frequently-than-in-drp»:»Why device drivers on many producers’ websites get updated less frequently than in DriverPack?»,»faq_questions_why-drivers-in-drp-newer-than-my-laptop»:»Why the drivers in DriverPack is newer than on my laptop’s website?»,»faq_sections-common-all»:»Common troubles, and solutions for them»,»faq_questions_antivirus-has-detected-virus»:»My antivirus has detectedavirus in DriverPack — what should I do?»,»faq_questions_how-to-remove»:»How to remove DriverPack?»,»faq_questions_what-should-be-done-if-troubles-after-using-drp»:»What should be done if operational troubles appear after using DriverPack, or the Blue Screen has occurred?»,»faq_questions_what-should-if-there-no-required-driver-in-drp»:»What should be done if there is no required driver in DriverPack’s database?»,»footer_banner-title»:»သင့်စက်ပစ္စည်းအတွက် ကိုက်ညီတဲ့ drivers များကို ရှာနေရတာ မောပန်းနေပြီလား?»,»footer_banner-caption»:»DriverPack Online က သင်လိုအပ်နေတဲ့ drivers တွေကို ရှာဖွေပေးခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းပေးခြင်း များကို အလိုအလျောက် ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်»,»footer_banner_btn»:»DriverPack Online ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ»,»footer_translate-feedback»:»သင်အမှား သို့မဟုတ် စာသားလွဲမှားမှုတစ်စုံတစ်ခု တွေ့ရှိပါသလား?
ထိုအရာကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး အောက်ပါအတိုင်းနှိပ်ပါ <>»,»header_search-title»:»Drivers ပေါင်းတစ်သန်းကျော်ရှိ — အကြီးမားဆုံးဒေတာဘေ့စ်ပေါ်တွင် Driver ရှာဖွေမှု»,»header_search-examples»:»ဥပမာ:»,»header_cta-text»:»အလိုအလျောက် driver ရွေးချယ်ရန်အတွက် DriverPack ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ»,»header_cta-btn»:»Drivers များကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းမည်»,»header_cta-label-1″:»ချက်ချင်း ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ပေးပါလိမ့်မည်»,»header_cta-label-2″:»Drivers များကို အလိုအလျောက် ရှာဖွေပေးခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းပေးခြင်း များကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ»,»headerbutton_title»:»Drivers များကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းမည်»,»headerbutton_label»:»DriverPack ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်»,»headeros_cta-btn»:» <> အတွက် drivers များထည့်သွင်းမည်»,»headeros_search-text»:»သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြီးမားတဲ့ driver ဒေတာဘေ့စ်ထဲတွင် ရှာဖွေခြင်းအတွက် အသုံးပြုပါ»,»landingdevicetypelist_landing-title»:»DriverPack သည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းအတွက်မဆို သင့်လျော်ပါသည်»,»landingdevicetypelist_landing-subtitle»:»Windows7SP1 သုံးထားသည့် USB 3.0 စက်ကိရိယာအတွက်တောင် ရှာဖွေနိုင်သည်»,»landingdevicetypelist_cta-btn»:»လိုအပ်သော drivers အားလုံးကို ထည့်သွင်းမည်»,»landingdevicetypelist_versions»:»အခြား DriverPack ဗားရှင်းများ»,»landingfeatures_landing-title»:»ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ပြင်ဆင်ရာတွင် DriverPack မှာ အဆင်ပြေဆုံးနှင့် အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်»,»landingfeatures_landing-subtitle»:»ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားများအတွက် သာမက စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်ပါ သင့်လျော်ပါသည်»,»landingfeatures_item-caption-free»:»DriverPack မှာ အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း»,»landingfeatures_item-title-safe»:»လုံခြုံမှု»,»landingfeatures_item-caption-safe»:»DriverPack သည် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တရားဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး၊ သင့်ကွန်ပျူတာကို ကာကွယ်ပေးခြင်း»,»landingfeatures_item-title-for-all-devices»:»စက်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်»,»landingfeatures_item-caption-for-all-devices»:»DriverPack သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံး driver ဒေတာဘေ့စ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆို ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း»,»landingheader_cta-text»:»DriverPack သည် drivers များကို အခမဲ့သွင်းပေးခြင်းနှင့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆို ကြုံတွေ့ရသည့် driver ပြဿနာများဖြေရှင်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်»,»landingheadernav_search-dll»:»DLL search»,»landingheadernav_search-soft»:»ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရှာဖွေမှု»,»landingheadernav_search»:»Driver ရှာဖွေမှု»,»landingheadernav_foradmin»:»ကွန်ပျူတာစနစ်ထိန်းသိမ်းသူများအတွက်»,»landingintroduction_author-title»:»မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်နာမည်မှာ Artur Kuzyakov ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က DriverPack ရဲ့ စာရေးသူလည်းဖြစ်၊ တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။»,»landingintroduction_author-speech»:»လွန်ခဲ့သော 8 နှစ်တုန်းက စစ်မှန်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး သေးငယ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုကို စတင်ရေးဆွဲသည့်အချိန်မှ အစပြု၍၊ ကမ္ဘာတလွှားရှိ လူပေါင်းသန်း 40 ကျော်အတွက် ကွန်ပျူတာပြင်ဆင်ရာမှာ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။
ယခုအချိန်ကာလအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုစမတ်ကျလာပါသည်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ DriverPack မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆန်းသစ်တဲ့ drivers များရှိသည့် အကြီးမားဆုံးသော ဒေတာဘေ့စ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိနေပြီး၊ ကမ္ဘာတလွှားရှိ မြန်နှုန်းမြင့် ဆာဗာများပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားရှိပါသည်။ Driver ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အမြဲတမ်းမြန်ဆန်နေပြီး မြင့်မားတဲ့အရေအသွေးရရှိနိုင်ဖို့ အလို့ငှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် machine learning နည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ algorithm မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေပြီး၊ ပိုမိုတိကျလာစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤအရာများကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်မှာ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို လုံးဝအခမဲ့အဖြစ်ထားရှိခြင်းနှင့် လူတိုင်းသုံးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကြောင့် ကျွန်တော့်အသင်းနှင့်ကျွန်တော်မှာ အားရဂုဏ်ယူနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ထိုထုတ်ကုန်မှာ အချိန်တိုအတွင်း မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်ထောက်အနေနဲ့ ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်နေပါသည်။»,»landingintroduction_author-speech-marked»:»ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်အားလုံးကို သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် ပုံအပ်ထားပါတယ်။»,»landingintroduction_video-caption»:»ထို့နောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Dmitry Medvedev ၏ DriverPack Solution အပေါ်ထားသည့်အမြင်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။»,»landingnotebookvendorslist_landing-title»:»DriverPack သည် မည်သည့်ကွန်ပျူတာအတွက်မဆို သင့်လျော်ပါသည်»,»landingnotebookvendorslist_landing-subtitle»:»ဟုတ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကွန်ပျူတာဖြစ်နေပါစေ — ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးပေးပါတယ်!»,»landingnotebookvendorslist_cta-btn»:»လိုအပ်သော drivers အားလုံးကို ထည့်သွင်းမည်»,»landingnotebookvendorslist_versions»:»အခြား DriverPack ဗားရှင်းများ»,»partners_landing-title»:»ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များ»,»landingproducts_cta-title»:»သင့် DriverPack ကို ရွေးချယ်ပါ»,»landingproducts_cta-description»:»သင်နှင့်ကိုက်ညီသောအုပ်စုကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ»,»landingproducts_item-title-online»:»DriverPack Online»,»landingproducts_item-description-online»:»အကယ်၍ သင်ဆီမှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါက ၎င်းကို ချက်ချင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါမည်။ ထို့နောက် drivers များအားလုံးကိုလည်း ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲကာ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည် (<>) «,»landingproducts_item-version»:»ဗားရှင်း:»,»landingproducts_item-button»:»ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»landingproducts_item-title-network»:»DriverPack Offline Network»,»landingproducts_item-description-network»:»၎င်းတွင် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာ (Lan/Wi-Fi) အတွက် drivers များပါရှိပြီး အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရန် မလိုအပ်ပါ (<>) «,»landingproducts_item-title-offline»:»DriverPack Offline Full»,»landingproducts_item-description-offline»:»၎င်းတွင် drivers များအားလုံးပါဝင်သည့်အပြင်၊ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရန်လည်း မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကို Torrent-tracker မှတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် (<>) «,»landingpublications__source-link»:»ဆက်ဖတ်ရန်»,»landingpublications__landing-title»:»သတင်းမီဒီယာများမှ DriverPack အကြောင်း ထုတ်ဝေမှုများ»,»landingscreenshots_landing-title»:»ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ပြင်ဆင်ရာတွင် DriverPack မှာ အဆင်ပြေဆုံးနှင့် အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်»,»landingscreenshots_landing-subtitle»:»ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်မှာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားများအတွက် သာမက စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်ပါ သင့်လျော်ပါသည်»,»landingsocial_landing-title»:»DriverPack အသိုက်အဝန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါ»,»landingsocial_landing-subtitle»:»သတင်းများကိုဖတ်ရှုကာ ဆွေးနွေးမှုများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးပါ»,»landingtopvideocardlist_landing-title»:»လူကြိုက်များသော ဗီဒီယိုကဒ်မော်ဒယ်များ»,»landingtopvideocardlist_landing-caption»:»DriverPack အနေနဲ့ မည်သည့် ဗီဒီယိုကဒ်မော်ဒယ်အတွက်မဆို ကိုက်ညီသည့် drivers များကို ရှာဖွေရွေးချယ်ပေးပါသည်။ အောက်ပါများမှာ နာမည်ကြီးသည့်အရာများဖြစ်သည်။»,»landingusers_cta»:»ကမ္ဘာတဝန်းရှိ DriverPack သုံးစွဲသူဦးရေမှာ စက္ကန့်အလိုက် တိုးပွားများပြားလာလျက်ရှိသည်»,»landingusers_cta-btn»:»လိုအပ်သော drivers အားလုံးကို ထည့်သွင်းမည်»,»landingusers_versions»:»အခြား DriverPack ဗားရှင်းများ»,»landingvideocardlist_landing-title»:»လူကြိုက်များသော ဗီဒီယိုကဒ် ထုတ်လုပ်သူများ»,»landingwizard_landing-title»:»ယခု ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ပြင်ဆင်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါပြီ»,»landingwizard_item-caption-download»:»DriverPack Online ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ»,»landingwizard_item-caption-setup»:»ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနဲ့ သင့်ကွန်ပျူတာကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါ»,»landingwizard_item-caption-profit»:»ရေး! ကဲအခုကွန်ပျူတာကတော့ အသစ်အတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်နေပြီနော်!»,»landingwizard_cta-btn»:»လိုအပ်သော drivers အားလုံးကို ထည့်သွင်းမည်»,»navbar_download-link-short»:»ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်»,»navbar_download-link»:»DriverPack Online ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူမည်»,»notfound_cta-text»:»သင်အနေနဲ့ DriverPack Online ကို အခမဲ့အသုံးပြုပြီး drivers များကို အလိုအလျောက် ရှာဖွေထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်»,»notfound_cta-btn»:»DriverPack Online ကို ဒေါင်းလုပ်ရယူမည်»,»notfound_info-404″:»<<404>> — တောင်းဆိုထားသည့်စာမျက်နှာကို ရှာမတွေ့ပါ»,»notfound_info-500″:»<<500>> — တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းမှု ဖြစ်သွားသည် (ဆာဗာ မှားယွင်းမှု)»,»notebookfilters-title»:»ရရှိနိုင်သော drivers များ»,»notebookvendorslist_other-text»:»အခြားထုတ်လုပ်သူများ»,»notebookvendorslist_title_os»:»<> အသုံးပြုသည့် လက်ပ်တော့ပ်များအတွက် Drivers များ»,»notebookvendorslist_title»:»လက်ပ်တော့ပ်များအတွက် Driver ရှာဖွေမှု»,»productlandingheader-online_cta-btn»:»Dri